Umshini wokusika we-Tube / Pipe Laser - I-Laser Yegolide
Umshini wethu wokusika we-tube laser wenzelwe ukusika amashubhu wensimbi anezimo ezahlukahlukene, kufaka phakathi isiyingi, isikwele, unxantathu, okusaqanda, kanye namaphrofayili anezingxenye ezihlukile ezivulekile zezinqe (Isib I-beam, H, L, T, ne-U cross- izigaba). Izixazululo ze-tube laser zihlose ukukhuphula umkhiqizo, ukuguquguquka nezinga lokusika lamashubhu kanye namaphrofayili kuqeda ngokusika okucacile kwe-fiber laser.
Ukusetshenziswa kwamapayipi asebenze nge-laser namaphrofayela kuhlukile, kusuka embonini yezimoto, ubunjiniyela bemishini, ukwakhiwa kwezakhiwo, ukwakhiwa kwefenisha kuya embonini yezolimo, njll. Ukusikwa kwe-Laser yamashubhu namaphrofayili kunikeza ububanzi obubanzi bezindawo zokukhiqiza izingxenye zensimbi futhi kunikeza ukwakheka okuguquguqukayo nokuhlukile amathuba.
1KW Fibre Laser Pipe Cutting Machine
Pipe laser cutting mshini 1KW fibre umthombo laser. Ubuningi ahlabayo odongeni ukujiya 12mm carbon steel, 6mm insimbi engagqwali, alumin 4mm ...
2000W Fibre Laser Cutting Machine for Metal Pipe futhi Tube
Metal ipayipi futhi tube laser cutting mshini 2000w fibre umthombo laser. Ubuningi ahlabayo odongeni ukujiya 15mm carbon steel, 10mm stainles ...